Chautari Daily » कोरोनाबाट विश्वभर ६४ हजारको मृत्यु, १२ लाख संक्रमित(कुन देशको अवस्था कस्तो?)
कोरोनाबाट विश्वभर ६४ हजारको मृत्यु, १२ लाख संक्रमित(कुन देशको अवस्था कस्तो?)
चैत २३, काठमाण्डौ / कोरोना भाइरसले अहिलेसम्म (चैत २३, १२:००बजे) ६३ हजार ८ सय ९४ जनाको ज्यान लिएको छ । त्यसैगरि अहिलेसम्म कुल ११ लाख ८२ हजारभन्दा बढि संक्रमित भएका छन् । संक्रमितमध्ये २ लाख ४४ हजार निको भएका छन् । तर उपचाररत ८ लाख ७४ हजारमध्ये करिब ४२ हजारको अवस्था गम्भीर छ ।
सबैभन्दा बढि संक्रमण फैलिएको अमेरिकामा कुल संक्रमितको संख्या ३ लाख ६ सय पुगेको छ । त्यस्तै एकदिनमै अमेरिकामा २३ हजार ४ सय ६४ जनामा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भएको छ भने ७ सय ५ जनाको मृत्यु भएको छ ।
अमेरिकामा अहिलेसम्म संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ८ हजार १ सय ५७ पुगेको छ । त्यस्तै शनिबारै फ्रान्समा सबैभन्दा बढी १ हजार ५३ जनाको मृत्यु भएको छ भने त्यहाँ संक्रमित हुनेको कूल संख्या ८२ हजार ९ सय पुगेको छ । मर्नेको संख्या ७ हजार ५ सय ६० पुगेको छ ।
सबैभन्दा धेरै मृत्यु इटलीमा भएको छ । इटालीमा एकैदिन ६ सय ८१ जनाको मृत्यु भएको छ भने कूल मृतकको संख्या १५ हजार ३ सय ६२ पुगेको छ । त्यहाँ संक्रमितको संख्या १ लाख २४ हजार ६ सय ३२ पुगेको छ । उता स्पेनमा एकैदिन ५ सय ४६ जनाको मृत्यु भएको छ ।
योसहित स्पेनमा मनेको संख्या ११ हजार ७ सय ४४ पुगेको छ । त्यसैगरि चिनमा मर्नेको संख्या ३ हजार २ सय २६ पुगेको छ । नियन्त्रणमा आइसकेको भनिए पनि चिनमा १९ जना नयाँ संक्रमित भेटिए भने ४ जनाको मृत्यु भएको छ । चिनमा अहिले पनि १५ सय ५८ जनाको उपचार भइरहेको छ । त्यहाँ कुल संक्रमितको संख्या ८१ हजार ६ सय ३९ हो ।
छिमेकी मुलुक भारतमा अहिलेसम्म ३ हजार ८२ जना संक्रमित छन् भने ८६ जनाको मृत्युु भइसकेको छ ।
प्रकाशित मिति २३ चैत्र २०७६, आईतवार ०१:०१
“नेपालमा पहिलेको भन्दा कडा खालको कोरोनाा..
आज काेराेनाबाट १३ जनाको मृत्यु, ४९६ नयाँ सङ्क्रमित थपिए
बढ्यो सुनको मूल्य, तोलाको कति पुग्यो ? हेर्नुहोस्
सिन्धुपाल्चोकमा बसले लखेटी-लखेटी मोटरसाइकललाई हान्यो, एक जनाको मृत्यु
बुधबारदेखि नयाँ बसपार्क टिकट काउन्टर बन्द
खोलाको ढुङ्गा निकालेर बेच्दै परिवार पाल्ने सुन्दरीको जादुमय स्वर (भिडियो सहित)
विद्यालय बन्द बारे आयो यस्तो खबर ( पढ्नुहोस् )